Kedu ihe kpatara na ị gaghị agbanwe sistemụ arụmọrụ gam akporo nke ekwentị gị | Nzukọ mkpanaka
Kedu ihe kpatara na ịgaghị agbanwe sistemụ arụmọrụ gam akporo nke ekwentị gị
Ignacio Sala | 09/10/2021 12:00 | android, Sistemụ arụmọrụ
Ịgbanwe sistemụ arụmọrụ nke ngwaọrụ eletrọnịkị bụ ọrụ ọ dị mkpa inwe ọtụtụ ihe ọmụma, ebe ọ bụ na ị ga -enwerịrị nsogbu niile ị nwere ike izute n'ụzọ.
Ọ bụrụ na anyị na -ekwu maka ekwentị, afọ ole na ole gara aga, ọ bụ ihe a na -ahụkarị ROM maka ngwaọrụ ụfọdụ, ROM ndị ị ga -etinyerịrị maka na emebere ha maka ngwaọrụ akọwapụtara. Mana ọ bụrụ na anyị esighi ebe ahụ pụọ, ịkwesighi gbanwee gam akporo os ekwentị mkpanaaka gị ọ nweghị ọzọ.
1 Sistemụ arụmọrụ maka ngwaọrụ mkpanaka
1.5 OS azụ Salfish
1.7 ndị ọzọ
2 Gbanwee sistemụ arụmọrụ gam akporo?
2.1 Ndakọrịta ọkwọ ụgbọala
2.2 Nsogbu de funcionamiento
2.3 Ị ga -atụfu akwụkwọ ikike
2.4 Ị gaghị enwe ike iweghachite ọdụ ụgbọ ala ahụ ka ọ dị na mbụ
Sistemụ arụmọrụ maka ngwaọrụ mkpanaka
Ebe ekwentị kụrụ n'ahịa na mbido afọ 2000, ọtụtụ sistemụ arụmọrụ agbalighị nke ọma n'inweta ọkwa n'ahịa, ahịa nke iOS na gam akporo na -achị ugbu a.
Microsoft nwere ohere ịbanye n'ahịa mana njikwa Windows Phone bụ ezigbo ọdachi n'aka Steve Ballmer, onye isi Microsoft n'oge ahụ.
Njikwa Steve Steve Ballmer metụrụ Windows Phone aka. Mgbe Satya Nadella rutere n'ọkwa onye isi Microsoft, ọ hụrụ na onweghị ihe ọ ga -eme wee kpebie ịhapụ Windows Phone ruo mgbe ebighi ebi.
Windows Phone nyere njikọ ekwentị enweghị kọmputa na-ejikwa Windows, dị ka iPhone nwere Mac. Microsoft kwụsịrị inye nkwado maka Windows 10 Ekwentị na Jenụwarị 2020.
Microsoft lekwasịrị anya mbọ ya n'inye usoro gburugburu ebe obibi ya niile nke ngwa na gam akporo yana ugbu a njikọta n'etiti gam akporo na Windows bụcha ihe zuru oke site na ngwa ekwentị gị.
Na 2013, Mozilla Foundation wepụtara Firefox OS, sistemụ mkpanaka mkpanaka HTML 5 nwere kernel Linux mepere emepe. Emebere ya ka o kwe ka ngwa HTML 5 jiri ngwaike mepere emepe API na JavasScript na -akparịta ụka ozugbo na ngwaike ngwaọrụ.
Sistemụ arụmọrụ a lekwasịrị anya na ọdụ ụgbọ ala dị ala na mbadamba dịka ZTE Open (nke Telefónica rere ya) na Peak. Na mgbakwunye, ọ dịkwa maka Raspberry Pi, igwe onyonyo smart, na ngwaọrụ mgbako na-arụ ọrụ ike.
Ndụ Firefox OS dị mkpụmkpụ, dịka n'afọ 2015, Mozilla Foundation kwupụtara na ọ na -akagbu mmepe Firefox OS maka ngwaọrụ mkpanaka. N'agbanyeghị nkwado sara mbara o nwetara site n'aka ndị ọrụ afọ ofufo, ndị na -emepụta smartphone anaghị akwado ya, ndị na -emecha bụrụ ndị na -ekpebi ma sistemụ mkpanaka ọ ga -eme nke ọma.
Ọ bụ ezie na Tizen na Samsung na -ejikọkarị ya, sistemụ arụmọrụ a dabere na Linux na HTML 5 bụ Linux Foundation na LiMo Foundation kwadoro ya iji mepụta sistemụ arụmọrụ maka mbadamba, akwụkwọ ndetu, ekwentị, smart TV ...
Mgbe ewepụtara ụdị nke ikpeazụ na 2013, ọ dakọtara na ngwa Android. Echiche mbụ maka ọrụ a bụ imepụta sistemụ arụmọrụ mepere emepe, agbanyeghị mgbe ewepụtara ụdị 2 ọ nọ n'okpuru ikike n'aka Samsung.
Tizen dị na Samsung smart TVs yana ngwa njikọ ya. Ruo n'oge na -adịbeghị anya, ọ bụkwa sistemụ arụmọrụ maka elekere smart nke ụlọ ọrụ Korea.
Na ekwentị mkpanaaka, ruo n'oge na -adịbeghị anya Samsung gara n'ihu na -ewepụta ekwentị Tizen maka mba ndị na -emepe emepe.
Companylọ ọrụ Canonical, raara nye ire ngwaahịa na ọrụ ya na Ubuntu, wepụtara ekwentị Ubuntu 2013, sistemụ na -eji eserese eserese site na mmegharị dabere na atụmatụ ịdị n'otu.
Otu n'ime ihe ndị kacha adọrọ mmasị ya bụ ikike iburu desktọọpụ Ubuntu site na ijikọ ngwaọrụ na keyboard na ọdụ ụgbọ mmiri.
Samsung jiri Deck nabata echiche a dị egwu, ọrụ na -enye anyị ohere ijikọ òké na keyboard na ekwentị Samsung ka ọ rụọ ọrụ dị ka a ga -asị na ọ bụ kọmputa nwere Ubuntu.
Na 2017, Canonical hapụrụ mmepe nke sistemụ arụmọrụ a. Ka ọ dị ugbu a, ọ bụ naanị ụlọ ọrụ BQ na Meizu ahọrọla ya, nke ọ bụla na -eji Ubuntu Touch ebupute ekwentị na ahịa.
OS azụ Salfish
Site na kernel Linux na mmemme na C ++, anyị na -ahụ Sailfish OS, sistemụ arụmọrụ maka ngwaọrụ mkpanaka nke ụlọ ọrụ Finnish Jolla Ltd. mepụtara, ụlọ ọrụ nke ndị ọrụ Nokia mbụ mepụtara mgbe Microsoft zụrụ ụlọ ọrụ wee malite iji Windows Phone.
Sailfish OS nwere ike ijikwa ngwa Android. Imirikiti sistemụ arụmọrụ a bụ sọftụwia na -akwụghị ụgwọ belụsọ maka njirimara onye ọrụ a na -akpọ Sailfish Silica, yabụ ndị niile chọrọ iji ya ga -akwụ ụgwọ maka ikike.
N'adịghị ka sistemụ mkpanaka ndị ọzọ, Sailfish OS na -aga n'ihu na mmepe ekele nkwekọrịta azụmahịa nke ụlọ ọrụ ahụ nwetara na China, Russia na ụfọdụ mba Latin America n'ihi mbilite nke iOS na gam akporo na -enweghị ike ịkwụsị yana enyo enyo nledo. .
Mgbe ịzụrụ Palm site na HP, ebuputara ngwaọrụ ọhụrụ atọ n'ahịa, ngwaọrụ na -eme nke ọma na ahịa nke na ha manyere ụlọ ọrụ ahụ ka ọ gaa n'ihu na mmepe ya na 2011.
N'afọ 2013, onye nrụpụta LG zụtara webOS iji jiri ya rụọ ọrụ maka igwe onyonyo mara mma. Na 2016 ọ wepụtara ekwentị mbụ ya na webOS ọhụrụ, Motorola Defy. Kemgbe ahụ ọ nweghị ihe ọzọ amatala gbasara mmepe webOS maka ekwentị.
Mgbe ọkwa LG hapụsịrị ahịa ekwentị, anyị nwere ike chefuo maka ịhụ ekwentị nwere webOS n'ọdịnihu.
Sistemu arụmọrụ nke mbadamba Amazon, dị ka nke Huawei na -eji na ekwentị ya, abụghị ihe ọzọ karịa ndụdụ Android, ya bụ, ha na -eji AOSP (Android Open Source Project) mana na -enweghị ngwa Google, yabụ na ha ka bụ gam akporo.
Gbanwee sistemụ arụmọrụ gam akporo?
Ọ bụrụ na ọ dịtụla mgbe ị tụlere ịgbanwe Android maka sistemụ arụmọrụ ọzọ, nke a bụ ihe kpatara na ọ bụ echiche ọjọọ.
Ndakọrịta ọkwọ ụgbọala
Maka akụrụngwa iji rụọ ọrụ na sistemụ arụmọrụ, dị ka modem nkwukọrịta, sistemụ arụmọrụ ga -enwerịrị ndị ọkwọ ụgbọala kwekọrọ na ya, n'agbanyeghị sistemụ arụmọrụ.
Imirikiti akụrụngwa anyị nwere ike ịhụ n'ime ekwentị gam akporo na -akwado naanị site na gam akporo. Ị gaghị ahụ nkwado maka ihe ndị a, n'agbanyeghị etu ha siri dị na sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ dị ka Windows Phone, Firefox OS, Tizen OS, Ubuntu, Sailfish, webOS ...
Nsogbu de funcionamiento
N'akụkụ ngalaba gara aga, anyị ga -ahụkwa nsogbu ọrụ, ọ bụrụ na oge ụfọdụ anyị nwere ike ime ka sistemụ arụmọrụ rụọ ọrụ na ekwentị.
Ọ bụrụ na anyị jisiri ike wụnye sistemụ arụmọrụ ọ bụla na gam akporo, o yikarịrị ka ụfọdụ njirimara ngwaọrụ agaghị arụ ọrụ, dị ka njikọ Wi-Fi, njikọ data, bluetooth ... na ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala dị mkpa. nwere ike bụrụ ọrụ tara akpụ ma ọ bụrụ na anyị enweghị ezi ihe ọmụma.
Ị ga -atụfu akwụkwọ ikike
Ọ bụrụ na smartphone ebe ịchọrọ ịnwale sistemụ arụmọrụ ọzọ erughị afọ abụọ, mgbe ị rụnyere sistemụ arụmọrụ ọzọ, ị ga -atụfu akwụkwọ ikike nke onye nrụpụta, yabụ na ọ bụ naanị ihe amamihe dị na ya ịgbalị ime usoro a na ekwentị ochie.
Ị gaghị enwe ike iweghachite ọdụ ụgbọ ala ahụ ka ọ dị na mbụ
Nsogbu ọzọ anyị na -eche ihu bụ na anyị agaghị enwe ike iweghachi ngwaọrụ ahụ ka ọ dị na mbụ, ebe ọ bụ na usoro a chọrọ ihichapụ akara ọ bụla gara aga echekwara na ngwaọrụ ahụ, gụnyere nkwado ndabere nke na -enye ohere iweghachi ngwaọrụ site na ọkọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Sistemụ arụmọrụ » Kedu ihe kpatara na ịgaghị agbanwe sistemụ arụmọrụ gam akporo nke ekwentị gị
Egwuregwu ụmụaka kacha mma n'ịntanetị, dị nchebe yana n'efu